ဇာဂနာပြောတဲ့စကားတဲ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ဇာဂနာပြောတဲ့စကားတဲ့
Posted by ကြောင်လေး on Oct 17, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Copy/Paste |6comments
ကျွန်တော်တို့နယ်မှာ စကားတစ်ခုထွက်လာတယ်။ သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁) နေ့လောက်ကစကြားရတာ။
ဒီစကားကဘယ်တုန်းကထွက်ထားသလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ ဇာဂနာထောင်ကထွက်မှပြောတယ်လို့ ပြောကြတာပဲ။
သိပ္ပံ ပညာရှင်ကြီး အိုင်းစတိုင်းကို မြန်မာ လေးယောက်ကဆွေးနွေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။
အိုင်းစတိုင်းကပြန်မေးတယ်၊ ခင်ဗျားအိုင်ကျူ ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ ၂၀၀ ပေါ့။
နောက်တစ်ယောက် -ဘယ်လောက်ရှိလဲ ၁၅၀၊ ရတယ် ဆွေးနွေးမယ်
နောက်တစ်ယောက် – ၁၀၀ ရှိတယ် ၊ဒါဆိုလဲဖြစ်ပါတယ် ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက် –၅၀ ရှိပါတယ်၊
သိပြီးသားသူများရှိနိုင်သလို မသိသေးတဲ့သူများအတွက်ပါ ၊ကျွန်တော်ကတော့ အခုမှကြားတဲ့စကားတစ်ခုပါ။
VOA အသံလွှင့်ဌာန၊ အောက်တိုဘာ ၁၂
“အိုင်စတိုင်းနဲ့ လူလေးယောက်နဲ့ တွေ့တယ်။ အိုင်စတိုင်းနဲ့ လူလေးယောက်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါကျတော့ တယောက်က စပြောတယ်။ ဟာ အိုင်စတိုင်းရေ၊ ကျနော်ကတော့၊ ကျနော့်ရဲ့အိုင်ကျူက ၁၈၀ ရှိတယ်ဗျတဲ့။ အဲဒီတော့ အိုင်စတိုင်းက လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက်ပြီး ကောင်းပါပြီ မိတ်ဆွေ၊ ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော်နဲ့တော့ ကွမ်တန် ဖိဆစ် (Quantum Physics) အကြောင်း ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
ကျနော်ကတော့ အိုင်ကျူ ၁၅၀ ပဲ ရှိတယ် အိုင်စတိုင်း ဆိုပြီးတော့။ ဟာ ကောင်းပြီဗျာ တဲ့၊ ခင်ဗျားနဲ့ကျနော်တို့ နောက်ဆုံးပေါ် သင်္ချာသီအိုရီတွေ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ တဲ့။
နောက်တယောက် ထပ်ပြောတယ်၊ ကျနော်ကတော့ ၁၂၀ ဘဲ ရှိတယ်ဗျ တဲ့။ ဟာ ခင်ဗျားနဲ့ ကျနော်နဲ့ ရုပ်ရှင်အကြောင်း ဆွေးနွေးမယ် တဲ့။
နောက်ဆုံးလူကကျတော့ ထပြောတယ်၊ မျက်နှာလေးက ပျက်လို့။ အိုင်စတိုင်းရေ တဲ့၊ ကျနော်ကတော့ အိုင်ကျူ ၅၀ ပဲ ရှိပါတယ်ဗျား။ ဟား….. ၀မ်းသာသွားတယ် အိုင်စတိုင်းက။ အဆင်ပြေလိုက်တာဗျာ၊ ခင်ဗျား လွှတ်တော်ထဲမှာ ဘာတွေ တင်ပြခဲ့သလဲ တဲ့။”
credit to moemaka(http://moemaka.com/2011/10/zargana-interviews-part-2/)
အွန်လိုင်းမှာတော့ ပြန့် လျက်ပါ
တရားသူကြီးက ဦးဇာဂနာ ဘယ်ပေါ်ချက်တာလည်းဆိုတော့ မီးဘို ပေါ်ချက်တယ်ဆိုလို့ ထောင် သုံးနှစ်ချတာပါတဲ့ဗျာ Meebo ကိုတရားသူကြီး မမကြားဖူးတော့ ပြက်တယ်ထင်သွားတာတဲ့
ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် အခုချိန်မှာတော့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့လူတွေကိုပဲအားပေးချင်ပါတယ်…
ဥပမာ.. ဆိုးမိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်ကို လိမ္မာလာစေချင်လို့ ဆုံးမမယ်ဆိုရင်.. “မင်းမိုက်လှချည်လား.. ဆိုးလှချည်လား.. သောက်သုံးနဲနဲမှမကျဘူး..” ဆိုပြီး သွားပြောလို့ မရပါဘူး…
ပျော့ပျောင်းညင်သာတဲ့နည်းနဲ့ပညာသားပါပါ သူ့ စိတ်က လိမ္မာလာချင်အောင် မြူပြီးပြောနိုင်မှလိမ္မလာနိုင်ပါမယ်… ဆိုးနေသော်ညား လိမ္မာကြောင်း ကောင်းကွက်ရှာပြောပေးမှပဲ… သူလိမ္မာတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကိုထိန်းချင်တဲ့ အတ္တနဲ့… သူ့ ဟာသူထိန်းပြီး လိမ္မာလာပါလိမ့်မယ်…
အသုံးမကျပေမဲ့…အသုံးမကျကြောင်းကိုပဲ. .အထပ်ထပ်ပြောပြီး .. အသုံးကျလာစေကြောင်းမျှော်လင့်နေမယ်ဆိုရင်တော့… လိမ္မာချင်နေတဲ့လူတောင် လူမိုက်ဖြစ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်… ဒါဟာ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ကျွန်တော်တို့ လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ အခြေခံအကျဆုံး အတ္တပါပဲ…
အိုင်းစတိုင်းက အိုင်ကျူ နှိမ့်လိုက်ရင် ပြီးသွားမယ့်ဟာကို/
သူကဘာလို့ အိုင်ကျူ မြင့်နေရတာလဲ မသိ ?/